Ikhamera yokuLuka iKhaphukhaphu | Izisombululo ze-OMG
Udidi Archives: Ikhamerare Lighter Ikhamera
Ikhamera ekhanyayo ye-OMG WIFI, HD1080P, Ikhamera ye-1.3M OV9712, Ixesha leBhetri 50min, Ikhadi le-SD iMax 128G (SPY279)
Ikhamera efihliweyo ye-OMG Mini eKhanyayo-iKhadi le-SD leNkxaso (SPY118)
Le mveliso yinto yokuqala ekhanyisiweyo ye-flashlight hd ividiyo Mini DV elula ukukhanya exhasa inkumbulo yekhadi le-SD. Le mveliso kulula ukuyisebenzisa kwaye incinci, iyasebenza, kulula ukuyithwala isixhobo sokhuseleko losapho, imfundo njl. Inokubonakala njengesikhanyiso esiqhelekileyo, kodwa ikhamera eyi-1080P efihliweyo efihliweyo yeKhamera ebonisa ikhamera efihliweyo ye-1080P ikuvumela ukuba ubambe Ividiyo ye-1080P ye-HD.
I-1080P yevidiyo ye-HD ikuvumela ukuba ubone kakuhle ukuba kuqhubeka ntoni xa ungekho ekhayeni lakho, eofisini, kwishishini, okanye naphi na apho ufuna khona ukhuseleko.
Ikhamera ekhanyayo ekhanyayo ye-HD efihliweyo Ikhamera ye-1080P eyinyani yokuKhanya (i-SPY117)
I-HD ayikho ikhamera yekhamera enekhenkco eneenkcazo eziphezulu zekhamera, i-video kunye ne-audio synchronization, ikhamera yokujikeleza ngokuzenzekelayo, umsebenzi we-lighter, umsebenzi we-disk U. I-1920 ye-1080P ye-XNUMXP, ayikho ikhamera efihlakeleyo, iifowuni ezifihliweyo, inokutshayelwa ukusebenza.
Uyilo olugqibeleleyo, ubukhulu bomzimba obugqithisileyo kunye neefayili eziqhelekileyo. Xa usebenzisa le mveliso, nceda landela imiyalelo kwincwadi yokufundisa.
Ikhamera efihlakeleyo efihlakeleyo ye-OMG (SPY034)
Izinto ezixhomekeke ekufumanekeni kwegatsha
Unako ukurekhoda kwixa le-1 xa uhlawula ngokupheleleyo.
Vula ividiyo kwaye ucacise ukurekhoda kwezwi
Enyanisweni kufana nesetyi-key; yenza urekhode ilizwi kunye nevidiyo
Uxhasa ikhadi le-SD eliya kwi-32GB
Ukuba ifowuni ishiywe kwimodi yokumamela ixesha elide ngaphezu komzuzu ngaphandle kokunika nayiphi na imiyalelo, amandla aya kuvalwa ngokuzenzekelayo.